Burdock impande akhiphe Yenziwe izinto zokusetshenziswa kuvuna ngoMeyi kuphela, futhi uketshezi sinombala-luhlaza ukuthi has a ukunambitheka amnandi futhi ethile, ngempela iphunga elimnandi. Izimpande zalesi sihlahla eziningi polysaccharide inulin, tannins, palmitic acid, bardanovoe, uwoyela ethereal kanye okunamafutha, amaprotheni, alkaloid, antitumor isinyathelo, sigmasterol, inhlaka, sitosterol, intukuthelo, isikhwehlela, phytosterol. Kuyaziwa ukuthi burdock impande akhiphe has ezihlukahlukene izakhi mkhondo ezifana zinc, titanium, iron, manganese, ithusi, i-strontium boron, vanadium nensimbi. Inani elikhulu izimpande has ascorbic acid.
ayelapha of burdock izimpande, kanye nezincomo uhlelo lwayo lokusebenza
Tifundvo letinyenti tesikhatsi lesidze futhi ziye zembula ukuthi izinto ziyingxenye izimpande zalesi sihlahla babe elwa namagciwane, eqeda ukuvuvukala, umphumela isisu. Futhi izinto ezikhishwe of burdock impande kuvusa izinqubo umzimba emzimbeni futhi kuyasiza ukwandisa sebethule glycogen esibindini. Ukusetshenziswa kwalesi izidakamizwa kuboniswe ngoba nephrolithiasis nesifo sikashukela, kodwa kuphela emazingeni yayo sokuqala. Futhi izimpande kukhona alkaloids, ezisiza zinqanda ukukhula izimila ahlukahlukene. Burdock impande akhiphe esetshenziswa ekwelashweni kwanoma iyiphi zivuvukale emlonyeni, seborrhea, eczema, induna kanye.
Lesi sidakamizwa isetshenziswa njenge-ejenti zokuvimbela futhi ngesikhathi yokwelapha adjuvant yezifo ezifana owaziwa futhi wandile njengesifo sikashukela, izifo ezihlukahlukene emathunjini ipheshana, sifo, ubuthi, ukukhuluphala ngokweqile isifo sokuqina kwemithambo yegazi, urolithiasis, rheumatism, umdlavuza, izifo zesikhumba , izifo ezithathelwanayo, kanye Alopecia njengenhlangano agent yangaphandle.
Omunye izinzuzo main of the akhiphe burdock impande ukuthi kuphephile ukusebenzisa. Imiphumela emibi le imithi azitholakali, lokhu kukuvumela ukuyisebenzisa njalo ukwelapha ezihlukahlukene nezifo ezingamahlala khona.
Burdock impande akhiphe - ukubuyekezwa kanye izincomo lokusebenza
Abantu abaningi ukusebenzisa lolu izidakamizwa ihambisana okugeza Russian. Kulokhu, emalungeni obonakele ukhilimu spreadable, njengengxenye elinendawo mug futhi akhiphe isiguli kunikezwa okuningi ukuphuza (ingilazi yamanzi isipuni burdock impande akhiphe). Ngemva kokwenza lokhu inqubo emalungeni obonakele ukhilimu sisetshenziswa futhi, basuke kahle ngci esebenzisa sigqoka lockable.
Nasi akhiphe burdock impande eyamukelayo nezincomo sezifo ezivamile:
Ngifundise ngesifo sikashukela - isiphuzo athathwe, esasihlanganisa akhiphe has lapho kuthatha isigamu isipuni 250 g amanzi, kubalulekile ukuba kuthathe kathathu ngosuku ingilazi egcwele.
izifo emathunjini ezifana kolwelwesi, isilonda peptic, isilonda duodenal, hhayi kuphela, kodwa futhi esiswini, pancreatitis okungamahlalakhona, isifo sokusha kwesibindi kohlobo - ukwelashwa wenziwa ngendlela efanayo sikashukela.
Izifo ezithathelwanayo kuhambisane imfiva - ukulungiselela isixazululo: ku kwengxenye isipuni ekstakta kuthathwe ingilazi yamanzi futhi amabili wezipuni of uju. Uphuzwe kathathu ngosuku phezu ingilazi lesi siphuzo.
Isifo sokuqina kwemithambo yegazi, futhi ukukhuluphala - e kuthathwe ½ ithisipuni ekstakta ingilazi egcwele amanzi kathathu ngosuku njengendlela agent zokwelapha noma prophylactic.
Ukuvuvukala Kwamalunga futhi ezinso - ngesikhathi yokwelapha lezi zifo Kusolwa isiphuzo esifanayo kathathu ngosuku.
Ushevu - uma kusetshenziselwa ukwelashwa ngokukhishwa kobuthi egazini izakhiwo akhiphe. Iphinde isetshenziselwe ukunciphisa Hangover.
"Mastometrin": yokusetshenziswa e wezilwane, ukwakheka kanye nokubuyekeza
Isixazululo Chlorophyllipt. isixazululo Chlorophyllipt ngoba gargling
"Djufaston" endometriosis - ukubuyekezwa. Ukuphumelela "duphaston" intengo
Hypnosis ukubhema: kokulutheka izinhlobo futhi isimiso yesenzo